Iziko loLondolozo lweeNdalo eziManyeneyo- Ilungelo laseMelika lokwazi
Isiko soBume beeMvelo
Iingxilimbela zamachiza ezothusayo zifuna indlela yokuvalwa kwenkundla ngababulali babo bokhula
ezaposwa ngomhla Juni 15, 2020 by UCarey Gillam
Bacaphula “imeko yongxamiseko,” izigebenga zemichiza i-BASF kunye ne-DuPont bacele inkundla yomanyano ukuba ibavumele ukuba bangenelele kwimeko apho inkundla ekuqaleni kwale nyanga yayalela ukuba i-dicamba herbicides ivalwe kwangoko kunye nemveliso ye-dicamba eyenziwe ngumnini-Monsanto uBayer AG .
Intshukumo yeenkampani zemichiza ilandela a Isigwebo se-3 kaJuni yiNkundla yezibheno yase-US kwiSekethe yesithoba eyathi i-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo (i-EPA) yaphule umthetho xa ivuma iimveliso ze-dicamba eziphuhliswe nguMonsanto / Bayer, BASF kunye neDuPont, ephethwe yiCorteva Inc.
I-EPA ukutyeshela loo myalelo, Nangona kunjalo, ukuxelela abalimi ukuba bangaqhubeka nokutshiza ngemichiza yokubulala ukhula ekuthethwa ngayo ukuphela kukaJulayi.
Umanyano lwamaqela asefama kunye nabathengi abathi ekuqaleni bafaka ityala ngokuchasene ne-EPA babuyele enkundleni kwiveki ephelileyo, ukucela umyalelo ongxamisekileyo ibambe i-EPA ngendelelo. Inkundla inike i-EPA kude kube sekupheleni kosuku Lwesibini, nge-16 kaJuni, ukuba iphendule.
Uqhushululu kwiLizwe laseFama
Umyalelo wokuthintela iimveliso ze-dicamba zeenkampani ubangele isiphithiphithi kwilizwe lasefama kuba abalimi abaninzi beembotyi zesoya kunye nomqhaphu batyale izigidi zeehektare zezityalo ezinyamezelayo ze-dicamba eziphuhliswe nguMonsanto ngenjongo yokunyanga ukhula kula masimi ngemithi ye-dicamba eyenziwe zezi zintathu. iinkampani.
"Inkqubo yesityalo se-dicamba" ibonelela amafama ukuba atyale amasimi abo ngezityalo ezinganyamezeliyo i-dicamba, abanokuthi emva koko batshize "ngaphezulu-phezulu" ngombulali we-dicamba. Inkqubo ityebise iinkampani ezithengisa imbewu kunye neekhemikhali kwaye yanceda amafama ukuba akhule umqhaphu okhethekileyo wokunyamezela i-dicamba kunye ne-soy malunga nokhula olunenkani olunganyangekiyo kwimveliso ye-Roundup esekwe kwi-glyphosate.
Kodwa kwinani elikhulu lamafama angazityali izityalo ezinyamezelayo zemfuza, ukusetyenziswa gabalala kwe-dicamba herbicides kuye kwathetha ukonakala kunye nelahleko yezityalo kuba i-dicamba ithambekele ekunyukeni nasekuhambeni kude apho inokubulala izityalo, imithi kunye namatyholo ayitshintshiswanga ngokwemfuza ukumelana nemichiza.
Iinkampani zibanga ukuba iinguqulelo zabo ezintsha ze-dicamba azizukuhamba kwaye zibaleke njengoko iinguqulelo ezindala zemveliso yokubulala ukhula lwe-dicamba zaziwa ukuba ziyazenza. Kodwa ezo ziqinisekiso zibonakalise zibubuxoki phakathi kwezikhalazo ezixhaphakileyo zomonakalo we-dicamba drift. Ngaphezulu kwesigidi esinye seehektare zomonakalo wezityalo waxelwa kunyaka ophelileyo kwi-18 ithi, inkundla yomanyano yaphawula kwisigqibo sayo.
Amafama amaninzi ekuqaleni abhiyozela isigwebo senkundla kwaye bakhululeka ekubeni iifama zabo kunye neigadi zabo zingasindiswa kweli hlobo kumonakalo we-dicamba abaye bahlangabezana nawo ehlotyeni elingaphambili. Kodwa uncedo lwaluhlala ixesha elifutshane xa i-EPA isithi ayizukunyanzela kwangoko ukuthintelwa kwenkundla.
Kwifayile eyenziwe ngolwesiHlanu, I-BASF iyicenge inkundla ukunganyanzelisi ukuvalwa kwangoko kwaye uxelele inkundla ukuba iyakudinga ukuvala indawo yokuvelisa eBeaumont, eTexas, okwangoku "esebenza iiyure ezingama-24 ngosuku phantse ngokuqhubekayo unyaka wonke" ukuba ayikwazi ukuvelisa uphawu lwayo lwe-dicamba olubizwa ngokuba Engenia. I-BASF ichithe i-370 yezigidi zeedola kule minyaka idlulileyo ukuphucula isityalo kwaye iqeshe abantu abayi-170 apho, utshilo inkampani.
Iphawula "utyalo-mali olubalulekileyo" kwimveliso yayo, i-BASF ikwatshele nenkundla ukuba yanele imveliso yayo okwangoku kuyo yonke "ijelo labathengi" lokunyanga ii-26.7 zezigidi zeehektare zesoya kunye nomqhaphu. I-BASF inezigidi ezongezelelekileyo ze- $ 44 yezigidi zeemveliso ze-Engenia dicamba, eyaneleyo yokunyanga ii-6.6 yezigidi zeehektare zesoya kunye nomqhaphu, utshilo inkampani.
UDuPont / uCorteva wenze impikiswano efanayo, ukuxelela inkundla ekufayeleni kwayo ukuba ukuvalwa "kuyonakalisa ngokuthe ngqo" inkampani "kunye nabalimi abaninzi kulo lonke eli lizwe eliphakathi kwexesha lokukhula." Iya konakalisa "igama" lenkampani ukuba ukubulala iyeza kuvaliwe, inkampani ixelele inkundla.
Ngaphaya koko, iDuPont / Corteva ilindele ukuvelisa "ingeniso ebalulekileyo" kwintengiso ye-dicamba herbicide, ebizwa ngokuba yiFeXapan kwaye iyakuphulukana naloo mali ukuba ukuvalwa kuyanyanzeliswa, utshilo inkampani.
IMonsanto yayisebenza kwimeko exhasa ukuvunywa kwe-EPA ngaphambi kwesigwebo, kodwa bobabini i-BASF kunye neDuPont baqinisekisa ngokungachanekanga ukuba ityala lenkundla lisebenza kuphela kwiimveliso zikaMonsanto hayi ezabo. Inkundla ikucacisile, nangona kunjalo, ukuba i-EPA yamkele ngokungekho mthethweni iimveliso ezenziwe zezi nkampani zontathu.
Ikhokelwe liZiko loKhuseleko loKutya, uxwebhu lwezikhalazo ngokuchasene ne-EPA lwaziswa ngumbutho weSizwe weFama yoMbutho, iZiko lokwahluka kweBioloji, kunye neNethiwekhi yokuSebenza kweZinambuzane eMntla Melika.
Xa ibuza inkundla ukuba ifumane i-EPA ngokudelela, iqumrhu liye lalumkisa ngomonakalo wezityalo oza kubakho ukuba iimveliso ze-dicamba azithintelwa kwangoko.
"I-EPA ayinakubaleka ngokuvumela ukutshizwa kwezigidi ezili-16 zeepiccic ze-dicamba kunye nomonakalo kwizigidi zeehektare, kunye nomngcipheko obonakalayo kumakhulu ezilwanyana ezisengozini," utshilo umdibaniso. Enye into isemngciphekweni nayo: umthetho. Inkundla kufuneka ithathe amanyathelo ukuthintela ukungabikho kobulungisa kwaye ixhase ukuthembeka kwenkqubo yokugweba. Ngenxa yokungahoywa ngokucacileyo kwe-EPA kwisigqibo seNkundla, abafaki-zikhalazo bayabongoza iNkundla ukuba iyidelele i-EPA. ”
I-Monsanto Roundup Trial Tracker I-BASF, Bayer, Isiko soBume beeMvelo, Iziko loKhuseleko loKutya, Corteva, umqhaphu, enkantolo, Dicamba, dupont, Engenia, EPA, Fexapan, ukutya, glyphosate, herbicides, IMonsanto, Yisonge yonke, zesoya, Xtend